/blog/Gallery/MK-677 (Ibutamoren) miyuu si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Muscle? Dib u eegista Sarm [2019 NEW]
Posted on 09 / 29 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Mid ka mid ah guulaha mk 677 weyn waa xoojinta koritaanka murqaha iyo soo kabashada. Tan iyo markii mk 677 dheereyntiisu kordhiso heerarka IGF-1 iyo GH qofka adeegsadaha wuxuu ku dhejin karaa cabbir badan si fudud. Tan waxaa lagu taageeray cilmi baarista iyo sayniska. Daraasadaha la sameeyay waxay muujiyeen koror aad u weyn oo ah mussle mass gaar ahaan dadka qaba yaraanta hoormoonka ragga iyo ragga da'da weyn gaar ahaan sannadihii 60 iyo wixii ka sareeya. Faallooyin badan oo loo yaqaan 'mk 677' ee dadka isticmaala ayaa sidoo kale soo jeedinaya in dawadan ay leedahay natiijo wanaagsan oo wanaagsan oo ku saabsan dhismaha unugyada murqaha.
Daraasad cilmi baaris ah oo saynis ah oo lagu sameeyay sideed qof oo sooman, Ibutamoren mk 677 wuxuu awood u yeeshay inuu beddelo luminta muruqyada iyo luminta borotiinka. Daraasad kale ayaa cadeysay in dawada ay sidoo kale caawisay bukaanada da 'weyn ee qaba jabka sinta inay gaaraan xoojinta muruqyada oo ay si fiican u helaan.
Ku dhawaad ​​dhisme kasta wuxuu qirayaa sida dhaawac gaar ah uu u daahiyo horumarkiisa / teeda iyadoo laga xirayo qolka jimicsiga maalmo, ama xitaa toddobaadyo. Haddii aad si joogto ah waqtigaaga ugu bixiso jimicsiga, dhaawacyadu waa lama huraan. Sidoo kale, kororka dhakhsaha badan ee muruqyada badan ee ka dhashay fadhiyadaada tababarka adag, waxaa laga yaabaa inay cadaadis badan saaraan unugyadaada oo ay ku jiraan lafaha u horseeda dhaawacyada.
Isticmaalayaasha badankood waxay qirayaan in mk677 ka caawiyay iyaga adkee dufanka baruurta. Natiijooyinka dufanka Mk 677 waxaa loo soo sheegay inay la yaab yihiin maxaa yeelay GH waa hormoonka kaliya ee kaa caawin kara inaad gubto labadaba dufanka maqaarka hoostiisa iyo muuqaalka halka aad awood u siineyso inaad horumariso muruqyada caatada ah. Sidaas darteed, Ibutamoren had iyo jeer waxaa lagu daraa barnaamijyada dib-u-jimicsiga jirka.
Faa'iidad kale oo ah X XXX waa in ay kiciso soo dhaweynta ghrelin oo ay sababi karto nootropic saamaynta. Sida lagu xusay daraasad cilmi baaris oo ay daabacday NCBI waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadista shaqada maskaxda iyadoo saameyn ku leh laba hab si aan toos ahayn. Farsamooyinkan waxaa ka mid ah kor u qaadista IGF-1 ee ka caawiya kor u qaadista xusuusta iyo awoodda barashada. Iyo, iyada oo kor loo qaadayo tayada iyo tirada tirada hurdada ee REM. Hurdadu waa muhiim maxaa yeelay waxay xaqiijineysaa in garashada fiicantahay.
Mk 677 waxay kordhisaa IGF-1, IGFBP-3, iyo heerarka hoormoonka koritaanka ee carruurta leh yaraanta hoormoonka koritaanka iyada oo aan wax laga beddelin isu-imaatinka cortisol, insulin prolactin, glucose, thyroxine (T4), thyrootinpin ama triiodotyronine (T3).
Ibutamoren wuxuu muujiyey saameyn la mid ah tan ragga RH, laakiin sonkorta iyo insulinta ayaa iyaguna kordhay.
Ahaanshaha "Ghrelin Mimetic" waa inaad filan kartaa inaad cunno aad u badan intaad ku hoos jirtay Ibutamoren. Haddii tani faa'iido leedahay ama aan faa'iido lahayn marka loo eego ujeedooyinkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad fahanto inay tahay mid ka mid ah natiijooyinka aan muranka ka jirin ee mk 677.
Ibutamoren si weyn ayey uga shaqaysaa xoojinta xasaanadda iyo wanaagsanaanta. Awooda jirkaaga si uu ula dagaallamo ugana fogaado dhibaatooyinka xilliyeed iyo xasaasiyada si weyn ayaa loo wanaajiyey. Waxaad bilaabi doontaa inaad ku noolaato nolol raaxo leh oo ay ka buuxaan nabadgalyo maskaxda.
Wareegga 1: Si aad u gaarto faa'iidooyinka ugu sarreeya ee loo yaqaan 'MK 677 (Ibutamoren) budada, waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo 10mg halkii 24 saacadood ee ugu horreysa toddobaadyada 11 ee isticmaalka ka hor intaadan ku darin 20-25mg halkii 24 saacado ka dib hareeraha 12th toddobaad. Tan waxaa loo qaadan karaa sidii dareere ahaan, af ahaan ama kaabsal.
Wareegtada 2: Waxaad sidoo kale ku bilaabi kartaa 15mg saacadii 24 oo aad ku dheerayn kartaa dhererkaaga wareegga MK 677 wixii ka dambeeya toddobaadyada 12. Markaad sidaa sameyso, ma aha inaad ka walwasho dhibaatooyinka ku dhaca qanjirkaaga pituitary ama waxyeelada kale.
Cycle 3: Inta badan jirdhiska jirdhiska wuxuu dib u dhacaayaa inuu ku kordhiyo qiyaasta MK 677 illaa 50mg maalin kasta isla markaana ay sii wadaan dhererka wareega 'X XXX siddeed toddobaad'.
Circle 4: Haddii aad rabto inaad dhisto muruqyada, adeegsadayaashu waxay soo jeedinayaan qaadashada qiyaasta Ibutamoren ee 30mg saacadii 24.
Circle 5: Haddii hadafkaaga ugu weyn uu yahay inaad daadiso dufanka, markaa adeegsadayaal badan oo waayo-aragnimo leh ayaa soo jeedinaya qaadashada 20mg saacadaha 24.
Cycle 6: Haddii hadafkaaga ugu weyn uu yahay in la bogsiiyo dhaawacyada, qiyaasta MK 677 ee 10-20mg maalin kasta ayaa si aad ah loogu talinayaa.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaadan ubaahnaan doonin PCT (Post Cycle Therapy) oo loogu talagalay mk 677 maaddaama aysan faragalin hormoon kasta.
Daraasaddeena iyo warbixinnada ay isticmaaleen dadka khibrada u leh waxay muujinayaan in 20mg illaa 30mg uu yahay qiyaasta ugu habboon ee loo yaqaan 'MK 677 mg'. Isticmaalayaasha qaarkood ayaa soo sheegay in ay qaataan in kabadan 30mg oo ah ibutamoren maalin kasta, laakiin tani ma bixin natiijooyin ka wanaagsan. Dhererka wareegga MK 677 wuxuu cadeeyay inuu ka muhiimsan yahay qiyaasta ibutamoren.
Maadaama ibutamoren uu wali yahay Maandooriye Cusub oo Baaritaan ah, FDA wali ma aysan ansixin. Si kastaba ha noqotee, mk 677 waxaa tijaabiyey qaar ka mid ah khubarada jimicsiga jirka ee bulshada dhiska kuwaas oo qiraya in dawada ay amaan tahay. Waxaa sidoo kale si weyn u bartay saynisyahano kuwaas oo sidoo kale qirtay in dawadu ay tahay mid wax ku ool ah.
Ibutamoren ayaa dhowaan caan ku noqotay bulshada dhexdeeda dhiska. Sababta ugu weyn ee mk677 nutrobal loogu isticmaalo si xad dhaaf ah loogu dabaqay dhismaha muruqyada ayaa loogu talagalay ujeedada kor loogu qaadayo heerarka GH. Qof kasta oo ku jira dhismaha jirka marwalba wuxuu rajeynayaa inuu yahay kan ugu qanisan uguna weyn.
Maaddaama Hormoonka Hormones ay aad qaali u yihiin ma jiraan xalal kale oo saaxiibtinimo oo jeceshahay oo kor loogu qaadayo hoormoonka korniinka, marka laga reebo Nutrabol. Mk 677 ayaa ah mid si aad ah loo awoodi karo marka la barbar dhigo HGH (Hormoonka Koritaanka Aadanaha) wuxuuna si hufan u dardargalin karaa heerarka hormoonka koritaanka aadanaha illaa xad weyn.
Waxa kale oo muhiim ah inaad ogtahay in Nutrobal markasta lagu xidho SARMs. Tusaale fiican waa isku darka S23, MK-677, iyo RAD140 (Testolone) budada.
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Skeletal muscle mass iyo qaybinta 468 ragga iyo dumarka da 'da' 18-88 yr. J Appl Physiol. 2000; 89: 81 – 88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y.,. . . Papanicolaou DA (2011). MK-0677 (ibutamoren mesylate) oo loogu talagalay daaweynta bukaannada ka soo kabanaya jabitaanka sinta: a multicenter, random ,zed phase II-control IIb daraasad. Diiwaanada Gerontology iyo Geriatrics, 53 (2), 183 – 189.
10 Steroids Ugu Caansan ee Anabolic-ka ah Matoor	Fikradaha khaldan ee sida caadiga ah looga helo steroids anabolic-ka adduunka
Xuquuqda daabacaadda © 2019 aasraw Lagu abuuray www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com